brain gain ဆိုဘဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » brain gain ဆိုဘဲ
brain gain ဆိုဘဲ
Posted by maungmoenyo on Jun 9, 2011 in Opinions & Discussion | 12 comments
မြန်မာအစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ Winstonဆက်အောင် (လက်ရှိ Asian Development Research Institute ရဲ့ director လည်းဖြစ်သူ) က မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာသွားကြသူတွေ ကို ယခင်ကခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြသလို brain drain (ဦးနှောက်ယိုစီးမှု) လို့မခေါ်သင့်တော့ကြောင်း။ အမှန်အားဖြင့်သူတွေ့ဟာ brain gain များသာဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့တတွေဟာ နိုင်ငံအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုသာမက၊ အတတ်ပညာနှင့် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုသယ်ဆောင်လာကြသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း ဒီနေ့ ပြောကြားလိုက်ခြင်းအားဖြင့်၊ ဒီနေ့ မြန်ိမာနိုင်ငံရြ့နိုင်ငံရြ့ နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာသစ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဟာကဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအခေါ်အယူဆတခုလဲဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်ပကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာသွားကြသူတွေ ကို မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး၊ ပြည်ပအားကိုးပဆိန်ရိုးလို့ စွပ်စွဲနေတဲ့ဘ၀ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ခြေလှမ်းဆိုရင် ကြိုဆိုရမှာပါ။ အစိုးရထိပ်ပိုင်းကစပြီး သိ/တတ်ပညာရှင်တွေကိုခုရက်ပိုင်းတွင်းမှာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လာကြတာတွေ့ရလို့၊ အရင့်အရင်ကမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ ခြေလှမ်းသစ်တွေမို့၊ ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမြင်ကောင်းအောင်သနပ်ခါးလိမ်း ပြီး ဝေါဟာရတန်ဆာဆင်တတ်တဲ့ မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် အတိတ် နံမည်ဆိုးလောင်းရိပ်ကမလွတ်သေးကြောင်း သိစေအပ်ပါတယ်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်နေတာကို တွေ့ရတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပညာတတ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု နေရာရလာပြီလို့ မြင်မိပါတယ် …. ကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုပါပဲ …
လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရလာကြရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ …
(ဦး)ဆက်အောင် ထပ်ဖောင်အောင် လက်ရှောင်လိုက်ပါ့မယ် ဦးမိုးညိုခင်ဗျား…
ကိုဆက်အောင် က နာမည်တပ်ရုံပဲတပ်နိုင်တာလေ။
တကယ်သူပြောတဲ့ နာမည်အတိုင်း ဖြစ်လာအောင် လုပ်ဖို့ သူလည်းတတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။
သူပြောနေကျစကားလုံးရှိတယ် “As I already told you” ဒါသူပြောနေကျ။
ဦးမိုးညိုခင်ဗျား …. အဲဒီအပေါ် ကိုယ့်အမြင်ဝေဖန်ချက်ကို ဒိထက်ပိုပြိး ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။
အချိန်ရရင်ဖြင့် ထပ်ပြီးချီးမြင့်ပေးပါအုံးလို့ …။
“သူတို့တတွေဟာ နိုင်ငံအတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေကိုသာမက၊ အတတ်ပညာနှင့် ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုသယ်ဆောင်လာကြသူတွေ ဖြစ်ကြောင်း…”
ဒါဆို သူတို့တွေပြန်လာချင်အောင် လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့။ ပြန်မလာသေးသူတွေလည်း သူတို့လုပ်ထားတဲ့ငွေလေးတွေပြန်ပို့နေရာက လူပါပြန်လာပြီး လေ့လာလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဒီမှာပြန်လုပ်ကိုင်ရင်း ဖြန့်ဝေနိုင်အောင်၊ ကျောင်းပြီးသွားသူတွေလဲ စာတွေ့လက်တွေ့တွေယူပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အသုံးချချင်လာအောင် အသုံးချခွင့်ရအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်… အခြားနိုင်ငံသားခံယူထားရသူတွေကိုပါ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပြန်လာခွင့်ပေးပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့်ရစေမယ်ဆိုရင်…… အမြဲတန်းနေထိုင်ခွင့်မပေးရင်တောင် တစ်လဗီဇာမျူိးမဟုတ်ဘဲ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့ အချိန်တစ်ခုလောက်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်….. ရာထူးကြီးကြီး လခကြီးကြီးယူထားကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေနေရာမှာ ကိုယ့်လူမျိူးပညာရှင်တွေ နေရာယူလာနိုင်မယ်ဆိုရင်….. ……….ဆိုရင် …..ဆိုရင်…..။
အရင်ထက်စာရင် ပြောခွင့်လေးရလာရင်ဘဲ တိုးတက်လာပြီ ပြောရမှာပေါ့။
အပြောလှလှလေး တွေက အလှပြောပြီးပျောက်မသွားဖို့လိုတာပါဘဲ။
သူတို့ရဲ့ အခွန်ဆောင်ရတဲ့ ငွေတွေအကြောင်း ဦးနှောက်ကို ရင်းပြီး ဆောင်နေရတာပါ။
ဒါတွေက တိုင်းပြည်က ရတဲ့ အကျိုး အမြတ် လား ?။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နွားလို ရုံးနေတဲ့ သူတွေ အတွက် ကော ဘာပြောမလဲ?။
ဒီလူတွေက Brain drain လား Brain gain လား?။
အဲ…ထောက်ပြတဲ့အချက်တခုကတော့..နိုင်ငံတကာအရပ်ရပ်မှာရောက်နေကြတဲ့သူတွေ ရုန်းရကန်ရ အလုပ်နဲ့နပန်းလုံးနေကြရတာကိုဘယ်လိုယူဆကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကြည့်ရင် လူတိုင်းအလုပ်ကိုမိုးလင်းကမိုးချုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ Saturday/Sunday နဲ့ long weekends တွေမျှော်ရတာက လူတိုင်းပါ။ ဒါကြောင့်လဲလူနေမှုအဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ဘ၀ကိုဆက်ကြရတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ကြဘို့လိုပါတယ်။
အလုပ်မလုပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ သက်သက်သာသာအလုပ်မျိုးလုပ်ပြီး အဆင့်နိမ့်နိမ့်ဘ၀မျိုးကိုနေမလား၊ အလုပ်ကိုတနေကုန်ကြိုးစားလုပ်ပြီး အဆင့်မြင့်မြင့်ဘ၀မျိုးနေချင်သလား…ဒါကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ကြည့်ရတာကတော့လက်ရှိအစိုးရသစ်က ပညာတတ်များကို နေရာပေးနိုင်ဘို့ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးလုပ်နေကြပုံရပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့မှာ လူလတ်ပိုင်းပညာတတ်တွေနေရာပေးလာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီပညာတတ်တွေကိုယ်တိုင်က ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရတွေရဲ့ ပညတ်အေတွေးအခေါ်တွေအောက်ကရုန်းထွက်နိုင်တဲ့လက္ခဏာ ဒီနေ့အထိမတွေ့ရသေးပါဘူး။
ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေက ဘယ်ပုံစံနဲ့လုပ်တာလဲ? ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးခွင့်တွေရခဲ့သလဲ? နိုင်ငံတကာမှာတကယ်လက်တွေ့နှစ်ရှေလများအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ပညာတတ်တွေကို နေရာမပေးနိုင်သေးသရွေ့ကတော့ တိုင်းပြည်ရေစုံမြောနေဆဲလက်ရှိဘ၀ကနေ မလွတ်သေးပါဘူး။ ဟောပြောသူကတဖက်၊ နားထောင်ကြသူလူများစုကတဖက်ထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲ ပုံစံထက် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ (round table talk) ကပိုအသက်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်၊ debate ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ ဆွေးနွေးတဲ့ ဘာသာရပ်တွေရဲ့ရလာဒ်ဟာလဲ ပိုပြီးလက်တွေ့ကျလာပါမယ်။
ဆွေူနွေးပွဲတွေရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်(၂) ရပ်ရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌတွေကဦးဆောင်စာတမ်းတင်ဆွေးနွေးကြသူတွေကို လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတဲ့ပုံတွေ အကျယ်တ၀င့် မြင်လိုက်၊ ဖတ်လိုက်ရတော့၊ မောင်မိုးညိုတယောက် ပက်လက်လန်သွားပါတယ်။ ဒါတွေဟာဟန်ပြသရုပ်ဆောင်မှုဆိုတာကိုသက်သေထူလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ အဆိုးထဲကအမြတ်ထွက်လာတာတခုကတော့ အရင်ကမကြုံမကြားဘူးတဲ့ ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ဖြစ်အောင်အစိုးရကစပြီး initiate လုပ်ပေးလိုက်တာမို့၊ နောင်မှာ အလားတူ private/public ဆွေးနွေးပွဲတွေ ရှိလာမှာကြိမ်းသေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လမ်းညွှန်မှကြားခြင်း၊ တွေ့ဆုံဂါရ၀ပြုခြင်း၊ ဖဲကြိုးဖြတ်ခြင်း…စသည်စသည်တို့ မြင်နေကြားနေသေးသရွေ့၊ public service ဆိုတဲ့ အဓိကအနှစ်သာရက ပုံပေါ်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းမြင်မိပါတယ်…။
နိုင်ငံတကာအဖဲ့အစည်း နဲ့ ကိုယ်ပိုင် သုတေသနပြုနေကြတဲ့ မြန်မာ scholars တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သူတဲ့ နယ်ပယ်တွေဖြစ်တဲ့ public services, administration, security, education, social and cultural, health စတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာဓိတ်ဓိတ်ကျဲ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ်လာပါပြီ။ ဒီThink Tank အဖွဲ့တွေကိုနေရာပေးဘို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တတွေက နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်စရိတ်အကုန်ခံပြီး မိမိတို့ရဲ့သုတေသနပြုရှာဖွေချက်တွေကို အကြံပြုကြဘို့ဝန်မလေးကြသူတွေပါ။
ဒေါ်စုကို လက်ရှိအစိုးရက ကမ်းလှမ်းပြီး၊ ရှင်ရိုသေလူရိုသေဆက်ဆံနေရာပေးလာရင်…. နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေ လှိမ့်ဝင်လာကြမှာမြင်ယောင်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့…အပေါ်စီးနဲ့မဟုတ်တဲ့၊ ကြိုတင်ဘောင်ခတ်ခြင်းအလျင်းကင်းတဲ့ ၊တန်ူတူရည်တူ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမျိုးကစ ရမှာပါ။ တကယ် နိုင်ငံရဲ့ရှေ့ရေး၊ လူထုရဲ့ရှေ့ရေးကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်ခုအချိန်ဟာ၊ ဇာတ်လမ်းစဘို့အကောင်းဆုံအချိန်ပါဘဲ။